बहिनीसँगको मेरो त्यो रात ! - Naughty Nepali
Home » Nepali Sex Stories » बहिनीसँगको मेरो त्यो रात !
बहिनीसँगको मेरो त्यो रात !
मेरा २ वटी बहिनी छन्। कुरा करिब १० वर्ष पहिलेको हो, जतिबेला मेरी कान्छी बहिनी ११ वर्षकी थिइ। कान्छीको नाम सुमी र जेठीको नाम सिमा हो। कान्छी निकै चञ्चले थिइ। सिमा भन्दा अग्ली भइसकेकी थिइ। हामी तीनै जनाबीच १-१ वर्षको फरक थियो। कान्छी भन्दा सीमा १ वर्ष अनि म सीमा भन्दा १ वर्षले जेठो थिए।
सुमी निकै राम्री थिइ। हामीसबै एउटै रुममा सुत्थ्यौ। एक साइडमा मेरो बेड थियो अर्को साइडमा सीमाको थियो सुमी र सीमासंगै सुत्थे। तर त्यो बेलुकी खेल्दा सीमासंग रिसाएपछि कान्छी मसंग सुत्न आएकी थिइ। बहिनी ठूलो भइसकेकी थिइ। खाटको कुनामा भित्ता तर्फ फर्किएकी सुमीको पुठोले मेरो पुठोमा छुदाँ मजा आउन थालेको थियो। उ ठाउँ सरिरहन्थी। उसको पुठोले मेरो तिघ्रा अनि पुठोमा बेलाबखत स्पर्श गर्दा त्यसको आकारको महसुस हुन्थ्यो। म निदाउनै सकिन। कोल्टे फेरे। सुमीको पुठोमा लिङ्ग ठोक्कियो। सुमीको शरिरको तातोसंगै उसंग च्याप्प टाँसिएर कपालको मन्द बास्नाको मज्जा आउन थाल्यो। कोठाको अर्को छेउमा सीमा बेलाबखत घुरेको सुनिन्थ्यो।
यता संगै सुतेकी सुमी चलेको देख्दा भने उ निदाएकी छैन जस्तो लाग्यो। उ खुट्टा खुम्च्याउने, सिधा पार्ने गर्थी। यसो गर्दा उसको पुठो कहिले अगाडी पछाडी हुन्थ्यो। कहिले पर सर्थ्यो त कहिले लाडोसंगै टाँसिन्थ्यो। केही बेरसम्म उसको पुठोमा लाडोले स्पर्श गरिरह्यो। उ चल्न छोडेपछि बिस्तारै उसको पुठोमा लाडो दल्न थाले। जोडले गर्दा उसले थाहा पाउने डर थियो। अझै उसको नजिक सरे। उसको सारा शरिरको स्पर्शमा पुठोमा लाडो दल्ने कामले मेरो स्वासको गति बढ्न थाल्यो। बढ्दो उत्तेजनाले मुखबाट केही फुत्किहाल्छ कि भन्ने डर हुन्थ्यो। केही बेरमै लाडो पुरै ठन्किएर उसको पुठोमा चर्को दबाब पारेको थियो। अधिक उत्तेजनाले अन्धो जस्तै भइसकेको थियो, होस् गुमिसकेको जस्तो थियो, उसले चाल पाउलीकी भन्ने भावमा कमी आउँदै थियो, जोस बढ्न थालेको थियो। उसको कानमा बिस्तारै साउती मारे, ‘सुमी…’ केही सेकेन्डपछि सुने, ‘हजुर…’, झसङ्ग भए, अनि उतिखेेरै मन हलुङ्गो भयो।
सुमी साच्चैको सुतेकी रहेनछे। सायद अघिदेखिको मेरो काममा उ पनि मस्त थिइ मजा मान्दै थिइ। मेरो यस्तो हर्कतमा उसले केही प्रतिवाद नगरेको देखेर भने ढुक्क महसुस भयो। उसलाई पछाडीबाट च्याप्प अंगालोमा हाले। सुमीका खुट्टा सिधा बने। पुठो मेरो लाडोबाट छुट्यो। अझै नजिक सरेर उसको पुठोमा फेरी लाडो पुर्याउँदा उसको शरिर पुरै मेरो स्पर्शमा थियो। सारा शरिरमा बढेको तापक्रम मैले महसुस गर्न सक्थे। मैले ब्ल्याङ्केट तानेर दुवैलाई छोपे। उ मतिर फर्की। उसलाई नजिकै तानेर अंगालोमा कसे। उसको छातिमा भर्खर उम्रेका स्तनको आकार महसुस हुने भइसकेको रहेछ। दुवै हातले उसको छाती खेलाउन थाले। उ लामो स्वास फेर्थी। ब्ल्याङ्केट भित्र बढेको गर्मीको असर, दुवै जनाको पसिना छुट्न थालेको थियो। बहिनीको पसिनाको बास्नामा मेरो मन उत्तेजित भइरहेको थियो। सीमाले अर्को खाटबाट देख्नु हुन्थेन, नजिकै भएकाले सुन्ने सम्भावना पनि रहन्थ्यो। उ बेलाबेला घुर्दा भने मन ढुक्क हुन्थ्यो । सुमीको टिसर्ट भित्र हात हाल्दा म उ माथी घोप्टो परेको थिए। मेरो वजनले उकुस्मुकुस्सिएकी सुमीको स्वासको गतिले उ माथी चल्न थाले। यसरी चल्दा मेरो लाडो उसको साँप्रामा पर्थ्यो। नरम छालाको स्पर्श भेट्टाएको लाडो ठिनिक्क भएको थियो। सुमीले विस्तारै दुख्यो भनी। अनि आफु उत्तानो परेर उसलाई आफु माथी घोप्टो पर्न भने। उ ममाथी चढी। सुमीको ओठ टोके।
निकै बेर ओठमा ओठ जोडाउन हामीले मेहेनत गर्नु पर्यो। निकै समय लाग्यो। अनि जिब्रो खेलाउन सिक्न थाल्यौ। जिब्रोलाई चलाउन त्यस्तो मजा आउँछ सोचेको थिइन। त्यस्तो गर्न मिल्छ भन्ने पनि थाहा थिइन। सायद मैले जस्तो मज्जा र अनोठोपना महसुस गरेको थिइ त्यो भन्दा बढी चकित सुमी भएकी थिइ होली। उसलाई दुई साँप्रालाई आफ्नोले चेपेर उसको जिब्रो चुस्न थाल्दा उ ममाथी निकै चलमलाउन थाली। अनि त्यसै बेला मैले उसको ट्राउजर हुँदै पेन्टी भित्र हात घुसारे। हात अलिक खाल्डो जस्तोमा पुग्यो। औलाले त्यसको चारै तिर चलाउन थाले। उसले मेरो हात समातेर तानी। अनि भित्ता पट्टी मुख फर्काएर सुती। उसको व्यवहारले मनमा डर पस्यो। फेरी नजिकै गए अनि ठान्किएको लाडो उसको पुठोमा पुर्याए। उसले केही प्रतिक्रिया गरिन। अनि दाहिने हातले उसको छाती खेलाउँदै उसको पुठोमा लाडो दल्न थाले। त्यसो गर्दा निकै मज्जा आइरहेको थियो। केही बेरमा लाडोबाट केही झरेको जस्तो लाग्यो। अन्डरवेयर भित्र हात हालेको केही चिप्लो पदार्थ थियो। त्यसपछि निकै थकाइ लागेजस्तो भयो। कतिबेला निदाएछु केही थाहा भएन। भोलीपल्टको दिन सामान्य बित्यो। त्यो बेलुकासम्म पनि सीमा र सुमीको बोलचाल भएको थियो। सुत्ने बेला सुमी मेरो खाटमा लुसुक्क घुस्रिन आइ।
bahini chikeko, bahini chikeko katha, chikeko katha nepali, nepali chikeko katha, बहिनीसँगको मेरो त्यो रात !
कता कता कुत्कुती लागेको हो कि के के भये जस्तो हुँदै थ्यो मलाई
एउटा साथी सधैँ गर्लफ्रेन्डलाई यसो गरेँ र उसो गरेँ भनेर हैरान गर्छ